नेटफ्लिक्सले सेप्टेम्बरमा हालका ग्राहकहरूको लागि यसको दरहरू बढाउनेछ ग्याजेट समाचार
नेटफ्लिक्सले सेप्टेम्बरमा सुरू हुने पुरानो ग्राहकहरूको लागि मूल्य बढाउँदछ
ईडर एस्टेबान | | चलचित्र र श्रृंखला, हाम्रो बारेमा
यी बितेका महिनाहरू हामी हेरिरहेका छौं नेटफ्लिक्सले यसको सदस्यताहरूको मूल्य बढाउँदछ। जे होस् यो मूल्य वृद्धि त्यस्तो चीज हो जुन केवल नयाँ प्रयोगकर्ताहरूलाई मात्र प्रभाव पार्दछ, जो पहिलो पटक खाता बनाउँदछन्। यद्यपि यो थाहा थियो कि कुनै समय मा पहिले नै खाता भएका जो कोहीले यो बृद्धि भोग्नुपर्नेछ। यो सेप्टेम्बर मा हुनेछ।
कम्पनी ईमेल मार्फत प्रयोगकर्ताहरूलाई सूचित गर्न सुरू गर्यो। मूल्य वृद्धि जो निश्चित रूपले नेटफ्लिक्स खाताको साथ धेरै प्रयोगकर्तालाई अपील गर्दैन। थप रूपमा, सम्झौता गरिएको योजनामा ​​निर्भर गर्दै, मूल्य वृद्धि बिभिन्न हुन सक्छ।
आधारभूत योजना मात्र एक हो जुन यस सम्बन्धमा अपरिवर्तित रहन्छ, month.7,99 युरो प्रति महिनाको मूल्यको साथ। स्ट्यान्डर्ड प्लानको मामलामा नेटफ्लिक्सले यसको मूल्य एक यूरोले बढायो, ताकि यो प्रत्येक महिना ११.11,99 युरोमा रहनेछ। योजना जहाँ बृद्धि सबै भन्दा ध्यान दिइन्छ प्रीमियम हो, जुन यस अवस्थामा १..15,99 यूरो पर्ने हुन्छ। यसको मूल्यमा दुई यूरोको वृद्धि।
कम्पनी पहिले नै यसको दिनमा घोषणा गर्‍यो म यो बृद्धि 30० दिन अगाडि घोषणा गर्दछु। यस अर्थमा, यसको वाचा पूरा भएको छ, त्यसैले प्रयोगकर्ताहरूसँग अब उनीहरूले आफ्नो खाता प्रयोग गर्न चाहान्छन् वा उनीहरूको मूल्यलाई नयाँ बृद्धिको कारण सदस्यता रद्द गर्ने छन् कि भनेर सोच्ने समय छ।
२०१ 2017 मा नेटफ्लिक्सले पहिले नै मूल्य बढाइरहेको थियो, समान अनुपातमा कि उनीहरूले अहिले गरेका छन्। प्लेटफर्मले संसारभर चारै महिना यसको दरहरू बढाइरहेको छ, श्रृंखला र फिल्महरूको लगातार विस्तार भैरहेको सूची उत्पादन गर्न बढी आम्दानी प्राप्त गर्ने तरीकाको रूपमा। यद्यपि केही असफलता पछि उनीहरूले घोषणा गरे कि उनीहरूले थोरै बजेट फिल्महरू उत्पादन गर्ने छन्।
नेटफ्लिक्स, मोभिस्टार + र अगस्तमा HBO मा के हेर्ने
यदि तपाईंसँग नेटफ्लिक्स खाता छ भने, यस्तो सम्भावना छ के तपाईंले पहिले नै ईमेल प्राप्त गर्नुभएको छ? भविष्यको मूल्य वृद्धि बारे जानकारी दिन जुन सेप्टेम्बरमा आउँछ। केही प्रयोगकर्ताहरूको लागि यो केही हदसम्म जटिल छ, किनकि योजनामा ​​निर्भर गर्दै उनीहरूले प्रति वर्ष २ 24 युरो बढी तिर्ने गर्छन्, जुन उनीहरूलाई धेरै मनपर्ने कुरा मात्र होइन।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » नेटफ्लिक्सले सेप्टेम्बरमा सुरू हुने पुरानो ग्राहकहरूको लागि मूल्य बढाउँदछ
G जी एनएसए र G जी एसए बीच के भिन्नताहरू छन्?
गति क्यामेराबाट बच्नको लागि अनुप्रयोगहरू